Uhlobo Lodumo | May 2022
UMongameli uDonald Trump uqalile ukuphinda enze iOval Office kwakhona- I-Oval Office ye-Oval Decor
Olona tshintsho luphawuleka kakhulu lolunye lwezinto esizithandayo kwigumbi: amakhethini.
Jonga i-Chip kunye noJoanna Gaines's Ibali loThando
I-Chip yeMagnolia kunye neJoanna Gaines batshatile ngo-2013 kwaye ngoku banabantwana abahlanu. Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana malunga nobudlelwane babo kunye nosapho.
Uhlala phi uKim Kardashian kunye noKhan West? Uluhlu lwazo zonke izindlu zikaKim Kardashian kunye namakhaya eKhan West
Ukusuka eKim Kardashian kunye neKhan West encinci encinci efihliweyo yoSapho lweNdlu, ukuya kwikhampasi yabo ezayo yeYeezy, kunye nawo onke amakhaya abo angaphambili.
Iifoto zeNdlu eNtsha kaChristina El Moussa awayithengayo emva koqhawulo-mtshato eTarek
Inkwenkwezi yeFlip okanye yeFlop uChristina El Moussa uzibetha eyedwa nendlu entsha eNewport Beach, CA. Nantsi indlela ethelekiswa nendlu awakhe wabelana ngayo nomyeni wakhe wangaphambili uTarek El Moussa.
I-Barefoot Contessa Barn -I-Ina Garten Hamptons Barn
I-Barefoot Contessa ithatha iNdlu entle kukhenketho lwenqanawa yakhe elula kodwa entle kwiiHamptons.
Iifoto zikaGisele Bündchen kunye noTom Brady weNdlu yaseMassachusetts-iTom Brady's Brookline Home iyathengiswa
Umva wekota emva kweNew England Patriots uTom Brady kunye nemodeli enkulu uGisele Bündchen bakha ikhaya labo elihle losapho eBoston, kwaye ngoku sele kwintengiso.
Ukuhlaziywa kweOval Office-UNdlu ngokutsha kweWhite House
Jonga zonke iindlela uMongameli uDonald Trumps ayenze ngokutsha iOval Office ukuyenza eyakhe.
U-Eric noJessie James Decker baninzi okwenzekayo, ukusuka kulawulo lwempahla yokunxiba kunye nesisa ekunyamekeleni abantwana babo abathathu. Okwangoku, isibini samandla sakwazi ukuguqula indlu yabo yaseNashville kwikhaya losapho elifanelekileyo. Jonga iifoto zamakhaya abo.
Ukungalali eSeattle Houseboat -Ifilimu eyaziwayo yeNdlu yeBhanyabhanya
Iphenyane lendlu elibonakaliswe kukungalali eSeattle lithengiwe ngaphezulu kwe- $ 2 yezigidi.
Kwenzeka ntoni ngemithi yeKrisimesi kaKim Kardashian?
I-intanethi izobe ezinye, uh, uthelekiso olunomdla.
Iindawo apho amaLadies okuQala akhulele khona-Amakhaya oMama oBuntwana aQalayo
Jonga emakhaya, kubumelwane nakwizixeko apho amaLadies okuQala akhulele khona.
Yintoni i-Shabby Chic? -Imbali yeRachel Ashwell's Shabby Chic
Umyili uRachel Ashwell uvula malunga ne-90s udumo, ukubhengezwa-kunye nokubuyela umva-konke ngelixa kuqhutywa iShabby Chic.
Yintoni iShiplap? -Ibali eliNgasemva kweShiplap Chip kunye noJoanna Gaines Sebenzisa
Izinto eziziinkwenkwezi eziLungisayo eziPhezulu zajika zaba ligama elinegama elinobomi ngaphambi kokuba uJoanna Gaines anyukele kwigama leHGTV. Apha, sijonga indlela i-shiplap eyadalwa ngayo kunye nendlela uJoanna kunye nomyeni wakhe, uChip, abayenze yathandwa ngayo.
Ukutyelela onke Amakhaya kaKylie Jenner - Iifoto zeNdlu nganye uKylie Jenner Owns
Ukusuka kwindawo yokuhlala yaseCalabasas awayithengayo eneminyaka eyi-17 ukuya kwindlu yakhe entsha eyi-36.5 yezigidi zeerandi eHolmby Hills, iivili zokuthengisa izindlu nomhlaba zikaKylie Jenner zinomtsalane.
Uyilo olugqwesileyo lukaJoanna Gaines ngalo lonke ixesha-iZinto eziLungileyo zokuLungisa eziPhezulu
Thetha Kule minyaka, u-Chip kunye noJoanna Gaines benze amawaka abantu # amakhaya abantu ukuba abe yinyani, nokuba ibingumntu kwi-HGTV's show show Fixer Upper okanye ngelayini yabo yasekhaya iMagnolia, evumela abalandeli ukuba bazise isignesha yesi sibini kwi-rustic space kwindawo yabo . Nangona phantse kungenakwenzeka ukukhetha ezona mpawu zintle zidlulileyo, ezi zoyilo zili-10 ziya kuhlala zimile.
IJayne Mansfield Pink Palace - Umlingisi uJayne Mansfield wasekhaya eHollywood
Ikhaya lasekhaya laseHollywood elaliyibhombu lalisaziwa njengechibi elineentliziyo elakhiwe ngumyeni uMickey Hargitay.
Indlu kaDick Clark yeFlintstone iyathengisa - Ikhaya laseMalibu leDick Clark lithengiwe
Ikhaya elingaqhelekanga lomsasazi weTV lithengise ngesiqingatha sexabiso laso lokuqala.
Amantombazana eGolide- Izizathu ezisixhenxe zokuba siyayithanda indlu yabo
Ndothulela umnqwazi oomakhulu bethu abahloniphekileyo ngokujonga emva kwikhaya labo eMiami.
Ikhaya likaBill Clinton loBuntwana-Ikhaya likaHillary Clinton loBuntwana
Nantsi imbonakalo ngaphakathi kwamakhaya abantwana bakaBill Clinton kunye noHillary Clinton.
UJoanna Gaines Ukwabelana ngeeNdawo zoKuthanda kwakhe eziDibeneyo zokuDibanisa imibala
UJoanna Gaines wabelane ngokudityaniswa kombala wepeyinti awuthandayo, kwaye ukukhetha kwakhe kuya kunika nasiphi na isithuba somoya opholileyo.
indlela yokutyala intyatyambo
indawo yokuhlala usekela mongameli
imibala yegumbi lokulala 2016
ukuhombisa indlu encinci